Finnair dia mandefa sidina Miami, Bangkok ary Phuket tsy miato avy Stockholm
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Finnair dia mandefa sidina Miami, Bangkok ary Phuket tsy miato avy Stockholm
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Soeda • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Thailand sy Miami dia anisan'ny toerana fialantsasatra amin'ny ririnina any Soeda.
Finnair dia manokatra làlana sidina tsy miato avy any Arlanda, Stockholm mankany Bangkok ary Phuket any Thailand.
Finnair dia manokatra làlana sidina tsy miato avy any Arlanda, Stockholm mankany Miami any Etazonia.
Ireo zotra telo dia hiasa amin'ny fiaramanidina Airbus A350.
Finnair dia manokatra làlana sidina tsy miato avy any Arlanda, Stockholm any Suède mankany Bangkok ary Phuket any Thailand ary Miami any Etazonia ho an'ny vanim-potoana ririnina 2021/2022. Ireo zotra telo rehetra dia hiasa miaraka amin'ny fiaramanidina Airbus A350 manolotra traikefa fitsangatsanganana malefaka sy maoderina.
"Faly izahay fa mahafeno ny filan'ny mpivarotra soedoà miaraka amina serivisy tsy an-kiato avy any Arlanda mankany Thailand sy Miami, izay anisan'ny toerana fialantsasatry ny ririnina any Swedia", hoy i Ole Orvér, Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-barotra, Finnair. “Ireo sidina vaovao dia hanamafy ny tolotra ataonay eo amin'ny tsena Suède.”
Hatramin'ny 22 Oktobra, Finnair dia misidina avy any Arlanda mankany Bangkok in-dimy isan-kerinandro amin'ny Alatsinainy, Talata, Alakamisy, Zoma ary Alahady. Manomboka amin'ny 28 Novambra, hampitomboina ho fito ny matetika isan-kerinandro ary ny sidina manomboka amin'ny Alatsinainy ka hatramin'ny Alahady hatramin'ny 22 aprily 2022.
Ny sidina avy any Arlanda mankany Phuket dia hiasa amin'ny Alahady hatramin'ny 24 Oktobra. Hisy fanampiny fanampiny hanampy Alakamisy hatramin'ny 4 Novambrath ary ny talata hatramin'ny 30 Novambra. Ny sidina mankany Phuket dia hiasa hatramin'ny 21 aprily 2022.
Ny sidina avy any Arlanda mankany Miami dia hanomboka amin'ny refesina roa isan-kerinandro, ny Alarobia sy Sabotsy hatramin'ny 23 Oktobra. Manomboka amin'ny 29 Novambra, ny sidina dia hiasa ihany koa ny alatsinainy sy zoma hatramin'ny 22 aprily 2022.
Finnair dia manidina mankany Bangkok, Phuket ary Miami koa avy eo amin'ny seranam-piaramanidin'i Helsinki Airport.